Vhura chigayo centre - China Ruizheng Industry
Sheet simbi Fittings
Tendeukai chigayo centre
Ruizheng hwokugaya hwakabvira
Metal bhokisi fekitari
Rapid machine psac zvikamu mharidzo
zvakarurama machine psac parts_communication adapteri
Supply Mano: 1000.000 Pieces Per Month
Payment Terms: T / T, L / C, D / P, D / A
Tinogona kubata mhando dzose nokukurumidza prototyping sezvo muzana yeGmail.END_STRONG chinodiwa.
Excellent basa, nenguva pakukurukura. OEM mugadziri pamwe high quality, makwikwi mutengo.
Product Kukura: machine pfupi miseve zvikamu, pfupi muchina miseve, azvikuya zvikamu, nendarira zvakarurama miseve muchina zvikamu, zvakarurama zvikamu, mhangura akatendeuka migove, CNC azvikuya uye wekushanduka zvikamu.
Material: Carbon simbi, Stainless simbi, aruminiyamu, nendarira, ndarira, mhangura, vakasununguka nokuveza simbi, kana maererano vatengi chikumbiro.
Processing Machine: CNC machine, machine centre, kukuya muchina, kwakajairika lathe muchina, azvikuya muchina, Drilling muchina, waya nokuveza muchina, otomatiki bhaa muchina, Swiss screws muchina.
Kupedzwa: zingi yakanamirwa pamifananidzo, nickel yakanamirwa pamifananidzo, Chrome yakanamirwa pamifananidzo, phosphating, makorari, nyaya kuomesa, carburization nokuomesa, anodizing, dema oxide.
Testing Zvivako: fungidziro muchina, roughness tester, zvakaoma tester, concentricity Esteri.
Pasuru: Inner mapurasitiki bhegi, rokunze atorwa, crate, kana iri kudiwa.
OEM kugamuchira: ne ruzivo rwokugadzira mainjiniya uye ano kuongorora midziyo, fekitari kwedu kunogona kukubatsira kuderedza mutengo pamwe high quality.
Yaiva Dongguan China, tiri mugadziri anenge specialized pakupa machine basa maererano chikumbiro vatengi 'uye Specification vanodhirowa, kana chiduku kana chikuru kwazvo zvinogamuchirika kwatiri.
Previous: Precison zvinoriumba
Next: cNC basa
Tendeukai Mill Center
* CAPTCHA: Tapota kusarudza Cup
machine psac aruminiyamu
Zvakarurama simbi fekitari
Address: Kwete 51, Jinghai East Road, South Shatou District, Chang'an Town, Dongguan City, Guangdong Province, China.